Afar kooxood oo sugeysa go’aanka uu Ivan Rakitic kaga tagayo Barcelona – Gool FM
(Yurub) 05 Mar 2020. Sida ay shaaca ka qaaday saaxafada Spain waxaa jira horumar cusub ee la xiriira mustaqbalka qadka dhexe reer Croatia iyo kooxda Barcelona ee Ivan Rakitic.
Sida laga soo xigtay wargeyska Isbaanishka ah ee “Mundo Deportivo”, Ivan Rakitic ayaa ku nool waqtigiisii ugu xumaa ee kooxda Barcelona, kaddib markii uu lumiyay booskiisii joogtada ahaa ee Barca.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in ku jiritaanka Ivan Rakitic ee kursiga keydka aysan ka hor istaagi doonin inay daba ceyrsadaan saxiixiisa kooxaha waaweyn ee Yurub si uu ugu biiro xilli ciyaareedka soo socda.
Warbixintan ayaa lagu xaqiijiyay in Inter Milan ay tahay kooxda aadka u xiiseeneyso inay la soo saxiixato, waxayna horey isugu dayaday inay go’aamiso heshiiskiisa xagaagii lasoo dhaafay, laakiin Barcelona ayaa diiday bixitaanka ciyaaryahankan.
Dhinaca kale wargeyska “Mondo Deportivo” ee dalka Spain ayaa sheegay in Diego Simeone, oo ah tababbaraha Atletico Madrid, uu la dhacsan yahay qaab ciyaareedka Ivan Rakitic isla markaana uu doonayo inuu la saxiixdo, isagoo ka faa’iideysanaya rabitaanka ciyaaryahanka ee ah inuu kusii nagaado gudaha dalka Spain.
Waxaa intaas sii dheer in sidoo kale Chelsea ay kor kala socoto xaalada Ivan Rakitic ee kooxda Barcelona, maadaama ay Blues dooneyso inay hesho xiddig si wanaagsan kaga ciyaari kara qadka dhexe kaasoo hogaamin kara kooxda.
Wargeyska ayaa ku soo xiray warbixintiisan isagoo xaqiijinaya inay jirto doorasho uu dib ugu laaban karo Ivan Rakitic Seville, xiddiga reer Croatia ayaa u arka in kooxdiisii ​​hore ay tahay gurigiisa labaad, maadaama xaaskiisa ay halkaas ka joogto isla markaana qeyb ka mid ah qooyskeeda ay magaaladaas ku nool yihiin.
Kooxda Barcelona oo heshiiska ay dib ugu soo ceshanayso Neymar Jr qeyb uga dhigaysa Dembele iyo Griezmann